Daawo Sawiradda 629 Muhaajiriin Dul saaran Markab oo loo Diiday inay galaan Talyaaniga – XAMAR POST
Daawo Sawiradda 629 Muhaajiriin Dul saaran Markab oo loo Diiday inay galaan Talyaaniga
Dowladda cusub ee Talyaaniga waxay la kowsatay inay dalkeeda u diido inuu ku soo xirto Markab Samafal oo ay la socdeen 629 Tahriibayaal, kuwaasi oo haatan ku xayiran Badweynta Mediterranean.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Cusub ee Talyaaniga, Matteo Salvini ayaa la sheegay inuu diiday in Markabkaasi ku soo xirto Dekedaha Talyaaniga.
Matteo Salvini oo bishan June 1-dii loo dhaariyey Xilka Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Talyaaniga waxa uu Xisbigiisa Midigta Fog ee (Lega Nord) waxa uu Ololihii Doorashadda ballan qaaday inay Ajendahooda Koowaad noqon doono sidii loo joojin lahaa Muhaajiriinta ku soo qulqulayso Talyaaniga, wuxuuna ballan qaaday inuuu dib u celin doono Nus million Muhaajiriin sharci-darro ku joogta dalka Talyaaniga.
Markabka wada Muhaajiriinta oo lagu magacaabo “The Aquarius” waxaa loo diiday inuu ku xirto Dekedaha Talyaaniga iyo Jesiiradda Malta, waxayna Shaqaalaha Markabka sheegeen inay haystaan cunto ku filan 2 ilaa 3 maalmood inta ay Badda sabaynayaan.
Muhaajiriinta la socota Markabkaasi waxaa ka mid ah 123 dad da’ yar oo aysan cidna la soconin, 12 carruur iyo 9 Haween oo Xaamilo ah.
Kooxda Samafalka ee SOS Mediterranee waxay sheegtay inay Markabka “the Aquarius” la socdaan 400 Muhaajriin oo ay ku wareejiyeen Markab Dagaal oo laga leeyahay Talyaaniga, Ilaaladda Xeebaha Talyaaniga iyo Shirkado Maraakiib Xamuul oo iyagu Muhaajiriintaasi ku so obadbaadiyey 6 Hawlgal.
Markabkaasi ayaa la sheegay inuu tagaan yahay meel 35 nautical miles ee Xeebaha Talyaaniga iyo 27 nautical miles ee Malta, waxayna Muhaajiriinta u muuqdaan kuwo taagan meel geeri-go’an ah, iyagoo aan ogeyn halka loo jiheyn doono iyo muddada ay Markabka dul saarnaan doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, Markabka ayaa weli war ka sugaya Dowladaha Talyaaniga iyo Malta oo iyagu u muuqda inaysan ka walaacsanayn nolosha Muhaajiriinta la soo badbaadiyey, kuwaasi oo diif iyo daal badan ka muuqdo.
DEG DEG: Banaanbax ka socda Isgoyska KM4
Wararkii ugu Dambeeyay Weerar Markale ka dhacay Duleedka Muqdisho